Ezokuphepha kwe-cyber nokuphepha kwe-cyber
ukuphepha kwe-IT okudingwa yinkampani yakho
Cyber ​​Security e Ukuphepha kwekhompyutha: le yimisebenzi ebaluleke kakhulu ukuvikela amasistimu we-IT ekuhlaselweni kwangaphandle. Injongo ukuvikela ubumfihlo, ubuqotho kanye nokusebenza okufanele kwe uhlelo lwekhompyutha. Ngaphezu kwalokho, i Cyber ​​Security unakekela ukuqinisekisa ubuqiniso bolwazi olujikeleza ngaphakathi kohlelo lwe-IT. Emkhakheni we Cyber ​​Security kunezinto zezomthetho, ezomuntu, ezobuchwepheshe nezenhlangano ezikwazi ukuhlaziya amaphuzu asengozini yohlelo, izinsongo kanye nezingozi ezihambisana nazo.
La Ukuvikelwa kwedathaOkomuntu siqu futhi ngenye indlela kungumdlalo lapho ikusasa nokusinda kwabaningi kuzodlalwa ngakho izinkampani ngokuzayo. Lapho Cyber ​​Security ivikela idatha nolwazi olukhona ezinhlelweni zolwazi, ukuvikela Inqubomgomo zenhlangano ezizimele nezomphakathi.
Ukuphepha kwenethiwekhi yekhompyutha
La Ezokuphepha kwe-cyber isiphenduke insimu ekhethekile njengoba ubuchwepheshe buye bavela. Ikakhulu, ne I-CyberSecurity kuvame ukuqinisekisa izici eziphathelene Ukuqina ukuqina e Ukusebenza kabusha kubhekwe njengebalulekile ngoba munye ubuchwepheshe ingamelana nokuhlaselwa okuhlose ukweqa ukusebenza kwayo kanye nobuqotho bayo.
UNella ukuphepha kwekhompyutha, TheUbuqotho bedatha kubhekiswa ku i-protezione yemininingwane nolwazi oluvela ekushintsheni okungenzeka kokuqukethwe, okwenziwe ngengozi noma ngokuzithandela ngabantu besithathu.
Amasistimu Wokubhala Okuthuthukile
Ukuqapha Isikhathi Esifanele
Izindlela Zokubhala Kwezempi Zamafayela Nama-imeyili
La Ukubethela isetshenziselwa ukuvikela imilayezo, imibhalo kanye nemininingwane ngokuyenza "ifiphale" ukuze ingazwisiseki kubantu abangagunyaziwe ukuyifinyelela.
Susa idatha yakho nganoma isiphi isikhathi
Nge Regulations I-GDPR esanda kuqalwa ukusebenza, kuyadingeka ukusebenzisa ubuchwepheshe evumela noma ngasiphi isikhathi ukusula ngokuphelele idatha yabo kumasayithi namapulatifomu.
Ukuqashwa Kwesikhathi Sangempela kanye Namadiski Abethelwe
Ubuchwepheshe obuphethe Ukuphepha kwekhompyutha kumele kube ukuthi zisebenza amahora angama-24 ngosuku futhi zinikeze idatha yesikhathi sangempela ngesimo sempilo se Izinhlelo Zokufundisa ihlaziywe. Phakathi kwesoftware ethembeke kakhulu embonini, I-Adaptive Defense 360 iqinisekisa ukusebenza anti-malware nohlelo lwe ukuqaphela isikhathi sangempela.
Izindlela Zokuphepha ze-IT
Amasu asebenzayo kakhulu we Ukuphepha kwekhompyutha zenzelwe ikakhulu izimiso ezintathu eziyisisekelo: ukuqapha okuqhubekayo kwezinqubo eziqhubekayo, ukuhlukaniswa okuzenzakalelayo kwezinsongo okungenzeka kanye neqembu elizinikele lochwepheshe abahlaziya isikhathi sangempela.
Isitoreji sokugcinwa kwedatha
Ukulawulwa okumaphakathi kwamadivayisi
Ukuqapha I-Web Traffic kanye nokuhlunga